Zvakanakira Kuedza Coupons uye Discounts | Martech Zone
Zvakanakira Kuedza Coupons uye Discounts
Svondo, November 29, 2015 Muvhuro, Mbudzi 30, 2015 Douglas Karr
Iwe unobhadhara mari yekutanga kuti utore zvitsva zvinotungamira, kana kupa dhisikaundi kukwezva ivo? Mamwe makambani haabate makuponi uye anoderedzwa nekuti anotya kudzikisira mhando yavo. Mamwe makambani ave kuvimba navo, zvine njodzi kudzikisira purofiti yavo. Pane kusahadzika kushoma kana kana ivo vachishanda, zvakadaro. 59% yevatengesi vemadhijitari vakati zvidzikiso uye mabundles zvinoshanda pakuwana vatengi vatsva.
Nepo zvidzoreso zvichishamisa pakutyaira zviwanikwa zvenguva pfupi, zvinogona kukuvadza pazasi rako, uye kudzidzisa mutengi wese kuti asatenge nemutengo wakazara. Izvi hazvireve kuti mabrandi haafanire kudzikisira zvachose - vashambadzi vane hunyanzvi vava kutarisisa kuendesa zvakaburitswa zvinehunyanzvi vs. kuvabata semuchina wekutendeuka. Jason Grunberg, Sailthru
Iko kiyi yekuendesa makuponi uye zvidzoreso zviri kuvaedza. 53% yevatengesi vedigital vanoita yepamusoro A / B kana multivariate kuyedza. Cherekedza mitengo yekushandurwa, migero yakashandiswa, kuwanda kwekutenga, avhareji kukosha kukosha uye kukosha kwehupenyu kwevatengi vakawanikwa kuburikidza nemakoponi uye zvidzikiso.
Takagovana zvese vatengesi vanofanirwa kuziva nezve coupon uye nzira dzekudzikisira mune yepamberi infographic. Nekudaro, zvese zvinodzikira mukusiyanisa kukosha, kusunga, uye kuwanda kwezvidzikiso kusvikira iwe wawana musanganiswa wakakodzera unokwezva nekuchengetedza vatengi pasina kutyora bhangi!
Tags: avhareji kukosha kukoshaChannelsnzira dzekuponiCouponsnzira dzekudzikisirakudzikisira muzera redhijitarihupenyu hwevatengi kukoshakukosha kwehupenyu hwesesailthruyokuedzwa
5 Dhata Inobvisa uye Zvakaipa Kushambadzira Kufungidzira
11 Nzira dzekuwedzera iyo ROI yeYako Yemukati Kushambadzira